Robot inona no hovidiana? Thermomix sa MyCook? Hodinihinay sy ampitahainay ny toetra mampiavaka an'ireo kinova roa an'ny robot roa hanampiana anao amin'ity fanapahan-kevitra ity: Thermomix TM31 sy MyCook.
Hanomboka amin'ny fahasamihafana lehibe efatra sy ny toetra mampiavaka izay afaka mamaritra ny safidinay izahay: ny vidiny, ny fomba fanafana ary ny hafanana, ny mpanamboatra ary ny endrika fividianana.
Thermomix tsara kokoa na MyCook?
Araka ny hitantsika, ny MyCook dia manodidina ny € 200 mora kokoa noho ny TMX. Hita taratra eto ny vidin'ny ofisialy, na dia samy hanao ny tolo-kevitr'izy ireo aza ireo marika roa hisarika mpividy bebe kokoa. Na dia afaka mampihena ny vidiny aza ny MyCook amin'ny fotoana sasany amin'ny taona, ny Thermomix dia afaka manome ny safidin'ny mpanjifa toy ny famatsiam-bola tsy misy zanabola, boky fahandro, kitapo fitaterana na vera 2 ho an'ny vidin'ny iray.
Fomba fanafana sy hafanana
thermomix: Fanoherana (37º - 100º)
Ny fomba fandrahoan-tsakafo dia iray amin'ireo fahasamihafana lehibe indrindra amin'ireo robot roa. Amin'izay fotoana izay dia nahavita nihoatra ny Thermomix ny MyCook satria ny fampidirana azy io dia fomba fampidirana, fomba maoderina kokoa sy haingana kokoa, miaraka amin'ny mari-pana manomboka amin'ny 40º ka hatramin'ny 120º. Na izany aza, ny thermomix dia mafana amin'ny alàlan'ny fanoherana, fomba nentim-paharazana sy miadana kokoa ary ny mari-pana dia eo anelanelan'ny 37º sy 100º. Noho izany, azontsika atao ny milaza fa mafana kokoa ny MC amin'ny 2-4 minitra noho ny TMX, miankina amin'ny habetsahan'ny atiny hafanaina hatrany.
Ny fandinihana ny fiovaovan'ny maripana dia hitantsika fa mahatratra 37º ny Thermomix, maripana tena ilaina amin'ny famonoana ny fotsy sy ny atody fluffing, ary koa ny fanaovana koba. Na izany aza, mahatratra 120º ny MyCook, maripana lavorary ho an'ny fries rehefa tsy afaka mihoatra ny 100º ny Thermomix.
MyCook: fividianana mivantana any amin'ny fivarotana fitaovana.
thermomix: ao an-trano amin'ny alàlan'ny mpanolotra Thermomix ofisialy.
Hitantsika eto ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe eo amin'ny samy robot. Mba hahazoana TMX dia tsy maintsy ataontsika amin'ny alàlan'ny mpanolotra izay tonga ao an-trano tsy misy fanoloran-tena izany, hampianarin'izy ireo anay amin'ny fomba manokana ilay milina ao anatin'ny 2 na 3 ora ary hiara-mahandro lovia maromaro izahay, ankoatry ny fangatahana karazana rehetra fisalasalana fa momba azy io isika. MyCook, etsy ankilany, dia azo vidiana amin'ny magazay fanaka rehetra, ka manala ny filan'ny olona rehetra tonga ao an-tranonao. Ny teboka ratsy eto dia ny tsy fahafahantsika mahita ny fomba fiasan'ny MyCook.
MyCook: Taurus - Espaina.
thermomix: Vorwerk - Alemana.
MyCook dia novokarin'ny orinasa Catalan malaza Taurus, izay manana traikefa nandritra ny 52 taona tamin'ny famoronana sy famolavolana kojakoja kely sy lehibe ho an'ny trano. Thermomix dia novokarin'ny orinasa alemana Vorwerk, miaraka amin'ny traikefa nandritra ny 120 taona namolavolana vokatra roa: mpanadio banga Kobold sy robot an-dakozia Thermomix. Eto isika dia misy teboka roa hanombanana: na mividy amin'ny orinasa Espaniôla, izay amin'ny fotoanan'ny krizy dia zavatra sarobidy amin'ny olona mba hijanonan'ny vola eto amintsika, na hisafidy hampiasa vola amin'ny lazan'ny teknolojia alemanina.
Andao izao handinika toetra mampiavaka hafa sy ny mahasamihafa ny samy robot:
Ny lelan'ny Thermomix
MyCook: Revolisiona 11.000 isa-minitra.
thermomix: Revolisiona 10.200 isa-minitra.
Na dia vao jerentsika aza fa ny MyCook dia mihoatra ny Thermomix amin'ny revolisiona, toa tsy maneho fatiantoka ho an'ny robot alemanina izany. Ny mamaritra ny kalitaon'ny fikosoham-bary dia ny endrik'ilay vera. Ny vera MyCook dia tery kokoa amin'ny fototra ary avo kokoa. Thermomix, izay nanana endrika mitovy amin'ny maodely teo aloha (TM21), no nanova azy tamin'ny famolavolana modely ankehitriny tamin'ny fanaovana lovia lehibe kokoa eo am-potony sy ambany, hahatratrarana fikolokoloana sakafo mahomby kokoa.
thermomix: 15 taona.
Mycook dia teny an-tsena nandritra ny taona vitsy raha oharina amin'ny Thermomix, noho izany dia tsy manana singa ampy hanombanana ny salanisan'ny Mycook izahay. Na izany aza, fantatray fa ny Thermomix dia afaka manana faharetan'ny antonony manodidina ny 15 taona.
Weight sy refy
MyCook: 10kg (360 x 300 x 290 mm)
thermomix: 6kg (300 x 285 x 285 mm)
Hitanay fa maivana kokoa ary kely kokoa noho ny MyCook ny Thermomix, endri-javatra handinihana ireo lakozia kely kokoa.
Mandany vola be ve ny fanadiovana ny Thermomix?
MyCook: Mitandrema rehefa manasa ny lelany satria tsy tafiditra ao anaty rano izy ireo.
thermomix: ny kojakoja rehetra dia azo antoka sy milentika anaty rano.
Raha resaka fanasana no resahina dia mandresy mazava i Thermomix. Manomboka amin'ny famolavolana ny sarony, afaka milaza isika fa ny MyCook dia manana ny notch mba hanamorana ny fidinan'ny sakafo mandritra ny fikolokoloana amin'ny hafainganam-pandeha izay mahatonga ny fanadiovana ho somary sarotra kokoa noho ny famafazana azy rehefa mianjera avy hatrany avy amin'ny paompy ny rano. Ary koa, tsy azo antoka ny milina fanasana lovia. Ireo toetra ireo dia teo amin'ny maodely Thermomix teo aloha (TM21) ary nivoatra tamin'ny 2004 niaraka tamin'ny maodely vaovao sy ankehitriny izay eny an-tsena: azo sasana ny lelany tsy misy olana amin'ny fanasana vilia ary milamina tanteraka ny sarony.
thermomix: fiheverana manokana avy amin'ny mpampiantrano sy fidirana maimaim-poana amin'ny fampianarana mahandro marobe.
Miaraka amin'ny MyCook, ny serivisy aorian'ny varotra dia mitovy amin'ny an'ny fitaovana hafa. Raha simba izany na mila soloina ianao dia mifandraisa amin'izy ireo ary mankanesa any amin'ny foibe mifandraika amin'izany. Saingy, hafa tanteraka ny fiasan'ny Thermomix. Ny zava-misy mandoa efa ho 1.000 euro sy manao ny fividianana amin'ny alàlan'ny mpanentana iray dia manana ny valiny. Ity mpanolotra ity dia ho fifandraisana amin'ny varotra aorian'ny fivarotana manokana ho an'ny zavatra ilainay. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha manana olana amin'ny masinina isika na amin'ny fisalasalana amin'ny resipeo rehetra dia afaka mifandray aminy avy hatrany isika ary hanatrika antsika manokana izy, ho tonga ao an-tranonay mihitsy aza izy hanao ny fomba fahandro izay toherinay miaraka. Ho fanampin'izay, ny delegasiona Thermomix dia manao fampianarana mahandro maimaim-poana amin'ny lohahevitra tena samihafa ho an'ny mpanjifa Thermomix ary azon'ireo mpanentana anay anasana anay.
Andao hojerentsika amin'ity fampitahana manaraka ity ireo toetra ireo
vidiny 799 € 980 €
Fomba hafanana Induction (manafana haingana kokoa) Mpanohitra
Revolisiona isa-minitra 11.000 10.200
fanadiovana Blades fanasana vilia tsy lovia Eny fanasana vilia
hafanana 40th-120th 37th-100th
fahafahana Litera 2 Litera 2
fepetra X X 360 300 290 MG X X 300 285 285 MG
lanja 10 kilao 6 kilao
Fomba fividianana Ao amin'ny magazay Amin'ny alàlan'ny mpanolotra amin'ny fampisehoana an-trano
orinasa Taurus (Espaniôla) Vorwerk (Alemana)
Robot any an-dakozia inona no hividy?
Tokony hanomboka amin'ny filazàna isika fa tena masinina mitovy izy ireo, na amin'ny toetra mampiavaka azy na amin'ny asany sy ny fampiasa azy ireo, ka noho izany, na misafidy iray na iray isika, dia hahazo robot tsara izay hanampy betsaka antsika ao an-dakozia.
Ny maodely MyCook ankehitriny dia tena mitovy amin'ny maodely TM21, noforonina efa ho 20 taona lasa izay, noho izany dia misy fiasa efa nohatsaraina tamin'ny maodelin'ny Thermomix (TM31) ankehitriny: ny fahateren'ny lovia eo am-potony izay mahatonga ny fitotoana sarotra kokoa, ny habe lehibe kokoa amin'ny masinina, ny takotra ao amin'ny sarony izay manahirana ny manasa sy ny tsy fisian'ny mari-pana 37º izay tena ilaina tokoa amin'ny fanaovana koba sy atody fluffing. Farany, ny mikasika, ny kalitaon'ny singa plastika amin'ny vera sy Ny kojakoja thermomix dia toa kalitao tsara kokoa noho ny MyCook.
Na izany aza, na eo aza ny tombotsoan'ny MyCook ny fanafanana amin'ny alàlan'ny fampidirana sy ny mari-pana 120º, dia mbola robot i Thermomix taona niainana bebe kokoa (ary, noho izany, manana fahatokisana bebe kokoa izy), fanasan-damba mora kokoa amin'ireo singa ao aminy, serivisy aorian'ny varotra izay manome ny fahasamihafana 200 euro tsy fahita firy ary mahomby kokoa amin'ny fikolokoloana sy ny fandrahoana noho ny famolavolana fitaratra tsara kokoa izay lehibe kokoa amin'ny ny fototra.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Thermomix
Raha mila ianao fampahalalana bebe kokoa momba ny fizotran'ny sakafo Thermomix, Mamporisika anao ny hidiranao ao amin'ilay faritra Inona no atao hoe Thermomix?